फाैजि किराकाे प्रकाेप र नियन्त्रण | Butwal Dainik
२०७८ जेष्ठ १२, बुधबार (४ हफ्ता अघि)
जेठ १२ प्युठान
प्युठानकाे झिमरुक गाउपालिका भित्रका अधिकांस स्थानमा लगाईएकाे मकैबालिमा अमेरिकीकन फाैजिकिरा देखिएकाे छ।कृर्षकले भर्खर लगाएकाे मकैबालि महिना दिन नपुग्दै फाैजि किरा देखिएपछि कृर्षक चिन्तित भएका छन। झिमरुक गाउपालिका एक र दुई मा व्यापक मात्रमा याे किराले सताएकाे कृर्षक बताउछन। गाउपालिका कृर्षिसाखाले तुरुन्तै ध्यान दिनेहाे भने मकैबालि संरक्षण गर्न सकिने स्थानियहरु बताउछन।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनले गाउँगाउँमा कृषि प्राविधिक पुग्न सकेका छैनन्। त्यसकारण किसान आफैले त्यसको पहिचान कसरि गर्न सक्छन।
यो किरा लाग्यो भने मकैको पात सेतो देखिन्छ। त्यस्तै मकैको गुभाेमा किराको आलो दिशा पनि देखिन्छ। मकैको गुभाे कोट्याएर हेर्याे भने त्यहाँ किरा भेटिन्छ। त्यो किराको पछाडि भागमा बराबर ४ वटा प्वाल देखियो भने त्यो फौजी किरो हो ।
कसरी गर्ने ब्यबस्थापन
साना किरा छन् भने निममा आधारित विशादी हाल्नुपर्छ। अलि ठूला जातका किरा छन् भने सुरक्षित विषादीको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ।
मकैको पातमा प्वाल पारेको तथा गुभोमा क्षतिको लक्षण देखा परेमा इमामेक्टिन बेन्जोयट ५ प्रतिशत एस. जी.०.४ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्नु पर्दछ।
क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल १८.५ प्रतिशत एस.जी. ०.४ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने, स्पाइनोस्याड ४५ प्रतिशत एस.सी.०.३ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने र वास्पाइनेटोराम ११.७ प्रतिशत एस.सी.०.४ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने गर्नु पर्दछ। इमिडाक्लोरप्रिड ४८ प्रतिशत एफ एस नामक बिषादी भने ४ मिली लिटर प्रति किलोग्राम बीउमा छर्नुपर्छ।
एउटै बिषादी निरन्तर प्रयोग नगरी आलोपालो गरी प्रयोग गर्ने तथा घोगा लागिसकेपछि बिषादी प्रयोग गर्न हुदैन।।
बिषादी छर्दा एक रोपनीमा लगाइएको मकैलाई २५ लिटर बिषादी हालेको तयारी झोल प्रयोग गर्ने र तयारी झोल गुभोमा पर्ने गरी छर्नु पर्दछ।
मुख्यतः मकै मन पराउने यो कीराले मकै नपाएको अवस्थामा जुनेलो, धान, गहुँ, कोदो, उखुबाली, घाँसेबाली, बन्दा, चुकन्दर, बदाम, भटमास, प्याज, कपास, गोलभेंडा, आलुबाली समेतमा क्षति पुर्याउने गरेको छ।